Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 29, 2020 00: 00 No Comments
Luxury waa lacag, laakiin xarragoodu waa kaliya xagga waxbarashada: raaxada waa xad-dhaaf; halka xarragoodu si sax ah uga timid shuruudaha. Markaa waxay kuxirantahay mid kastaa inuu doorto oo uu raaco xariiqooda udhaxeeya raaxo iyo xarrago.
Covid-19 ayaa laga arkay aragtida saxda ah: qofkasta wuxuu uqalmaa cudurka Fayras Corona (Covid-19) hab ayaga u gaar ah Xirfadlayaashuna ma aha nasashada. "Maanta, fayraska Corona wuxuu dilay in kabadan 20 kun oo qof adduunka oo dhan".
Sep30 03: 43